Ny fivarotana firaketana tsara indrindra any New York (I) | Vaovao momba ny dia
Sarin'ireo firaketana vinyl isan-karazany
Raha mpitia mozika ianao, azo antoka fa mandritra ny dia ataonao any New York dia maniry ianao mikaroha rakipeo sasany hampitomboana ny fanangonana mozikao. Raha, ankoatra izany, dia mpankafy vinyl ianao; Manaraka izany dia hanolotra anao ny sasany amin'ireo magazay tsara indrindra hahazoana ity endrika mozika ity amin'ny Big Apple.
Ho hitanao ao amin'ny Greenpoint Firaketana maharitra, fivarotana vinina indie kely izay ahitanao kalitao mihoatra ny habetsahana. Ny vidiny dia fandrisihana ihany koa eto, satria ho hitanao ny vinyl eo anelanelan'ny 2 sy 4 dolara (mihoatra ny 3 euro). Ary ambany dia ambany ny vidin'izy ireo, tsy midika izany hoe tsy mandeha ny vinyl, satria vitany tsara izany.
Tany Williamsburg, nanokatra ny sampana voalohany an'ny franchise izy ireo Varotra an-tsokosoko Any New York. Ny fivarotana dia mihoatra lavitra noho ny lehibe ary, ankoatry ny fahitana izay vinyl tadiavinao dia misy ihany koa ny toerana hanaovana fampirantiana, fanaovana sonia ary kaonseritra isan'andro.
CO-Op 87 firaketana, dia iray amin'ireo fivarotana vinyl tena ilaina ao New York. Amin'ity toerana ity dia hahita rakitsoratra efa nampiasaina ianao avy amin'ny $ 3 (latsaky ny 2.5 euro) ary, ny tena manaitra ny toerana, dia angamba ianao hahita rakitsoratra tsy fahita firy sy ireo marika indie eo an-toerana, izay tsy ho hitanao any an-kafa .
Toerana tonga lafatra iray hafa ho an'ireo mpitia mozika dia Academy Records. Ity magazay ity, izay nisokatra tamin'ny 1977 niaraka tamin'ny boky ihany, dia nanjary iray amin'ireo fivarotana firaketana tsara indrindra ho an'ny mozika kilasika, jazz ary mozika rock tany Manhattan hatramin'ny tapaky ny taona XNUMX. Any Williamsburg dia manana magazay hafa manokana momba ny vinyl koa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny fivarotana firaketana tsara indrindra any New York (I)
Ny Dune of Pilat any Frantsa